Local Media - भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सुरु,के मोदीको कार्यकाल दोहोरिएला त ?
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सुरु,के मोदीको कार्यकाल दोहोरिएला त ?
प्रकाशित समय: बिहिवार, ०५ : ३१ बजे चैत्र २८ गते
भारत -भारतमा लोकसभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन बिहीबार शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)का तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार, यस पटकका चुनावमा करिब ९० करोड मतदाताले मतदान गर्दैछन् । चुनाव सात चरणमा हुनेछ ।
जनमत सर्वेक्षणले ६८ वर्षीय प्रधानमन्त्री मोदीप्रति धेरै मानिसले विश्वास देखाएका छन् तर यस पटक नेहरु–गान्धी परिवारको छायाँमा रहेको पुरानो दल इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले कडा चुनौती दिने सम्भावना पनि देखिएको छ । चुनावमा सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर राखी सुरक्षा बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको छ ।
यसै साता माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा शंकास्पद माओवादी विद्रोहीले स्थानीय विधायकसहित पाँच जनाको हत्या गरेका छन् । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चुनावलाई प्रभावित तुल्याउने गरी गलत जानकारी, नक्कली समाचार, ट्रोल्स प्रवाह भइरहेका छन् । खासगरी फेसबुक र ह्वाट्सआपमा गलत सन्देश प्रवाह हुनेक्रम जारी छ ।
विश्वमै सस्तो इन्टरनेट सेवा र स्मार्टफोनका कारण गलत समाचार सन्देश प्रवाह गर्न सहज भएको ठानिएको छ । भारतभर हजारौं दल र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
भारतीय लोकसभाका ५४३ स्थानका लागि चुनाव हुँदैछ । आगामी मे १९ तारिखसम्म जारी रहने सात चरणको चुनावको अन्तिम नतिजा मे २३ मा सार्वजनिक हुनेछ ।
करिब एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या रहेको भारतीय चुनावका लागि ११ लाख विद्युतीय मतदान मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ । बिहीबारको पहिलो चरणको चुनावमा करिब १४ करोड २० लाखले मतदान गर्नेछन् ।
पहिलो चरणमा चीनसँग सीमा जोडिएको अरुणाचल प्रदेशदेखि असाम, उत्तर प्रदेश, जम्मु र काश्मिर तथा तेलाङ्गाना समेतका २२ राज्यका ९० स्थानका लागि चुनाव हुँदैछ ।
यस पटकको चुनावमा आठ करोड ४० लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार बिहानै ट्वीट गरी मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
मोदी र उहाँको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सन् २०१४ को चुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएको थियो । भारतमा ३० वर्ष यता पहिलोपटक सन् २०१४ मा एउटै पार्टी भाजपालाई बहुमत प्राप्त भएको थियो ।